Ganacsato Soomaaliyeed oo Lagu Gumaaday Koofur Afrika. – Shabakadda Amiirnuur
November 21, 2017 6:25 pm by admin Views: 148
Ganacsato Soomaaliyeed oo ay tiradoodu gaareyso Ilaa 5 qof ayaa lagu dhex dilay dukaan uu ganacsade Soomaali ah ku lahaa degmadda KwaDlangezwa ee Waqooyiga Gobalka KwaZulu-Natal ee dalkaas iyadoo sidoo kale la dhaawacay labo qof oo kale oo ay xaaladoodu aad u liidato.
Weerarkan ayaa ahaa mid lagu doonayay in lagu dhoco ganacsatada Soomaalida sida uu sheegay Tv-ga koonfur afrika, waxaala ay wararku sheegayaan in kooxa weerarkan foosha xun geystay ay toogasho ku dileen 2 kamid ahaa Ilaaladda Ammaanka iyo 3 qof oo ku dhax jiray dukaanka waxayna dableeyda dhaceen lacag caddaan ah oo gaareeysay R50,000 oo u dhiganta 5000 oo dollar.
Ibraahim Maxamed oo ka mid ahaa Shaqaalaha Dukaanka ayaa sheegay inuu Weerarkaasi ahaa Fal Dhac ahaa, isla markaana ay had iyo jeer ka dhacaan dalka Koonfur Afrika. “Ma dhihi karno weerarka waxa uu xiriir la lahaa Falalka Isir-nacaybka ka jira koonfur afrika , waxaana uu weerarku ahaay mid dhac ah maadama sanadka uu gabo gabo sii maraayo”ayuu yiri Ibraahim.
Dhinaca kale, Madaxa Ammaanka Bulshadda ee Gobalka KwaZulu-Natal ninka lagu magacaabo Makolisi Kaunda ayaa sheegay inay ka war heleen Dhaca Hubeysan iyo dilka ka dhacay Dukaanka Soomaalida, isla markaana ay wadaan baaritaano lagu soo qabanayo dableydii ka dambaysay dilka 5-ta qof iyo dhaca dukaanka loo geeystay.
Dalka Koofur Afrika ayaa waxa uu kamid noqday wadamada safka hore uga jira dalalka lagu gumaado laguna dhoco dadka Soomaaliyeed, iyadoo safaaradda ay DF ka ku leedahay dalkaasi aaney ka hadlin dhacdadan iyo kuwii faraha badnaa ee ka horreeyay.